अमेरिकाको युक्रेनी राष्ट्रपतिलाई प्रस्ताव: भाग्ने हो ? जहाज पठाऊ ? - Kantipath
अमेरिकाको युक्रेनी राष्ट्रपतिलाई प्रस्ताव: भाग्ने हो ? जहाज पठाऊ ?
शनिबार फाल्गुन १४, २०७८
युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडोमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकाले गरेको उद्धारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको खबर अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेका छन्। जेलेन्स्कीले ‘युद्ध यहाँ भइरहेको छ। मलाई गोलाबारुद चाहिएको छ, भाग्नका लागि सवारी होइन’ भन्दै अमेरिकाले गरेको उद्धारको प्रस्ताव लत्याएको खबरमा दाबी गरिएको छ।
एसोसिएट प्रेसले अमेरिकी उच्च गुप्तचर अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै यसबारे खबर प्रकाशित गरेको हो। द वासिङ्टन पोस्टले पनि अमेरिकी तथा युक्रेनी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी सरकार जेलेन्स्कीलाई सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेको छ।
रुसी आक्रमणको प्रतिवाद गर्न आफै सडकमा आएका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको सामाजिक सञ्जालमा निकै प्रशंसा भइरहेको छ। उनले रुसलाई चेतावनी दिँदै यसअघि भनेका थिए, ‘जब तिमीहरुले हामीमाथि आक्रमण गर्छौँ, हाम्रो पिठ्युँ होइन अनुहार देख्ने छौं।’